Gadzirisa matambudziko neSplit View muOS X El Capitan | Ndinobva mac
Gadzirisa matambudziko ne Split View mu OS X El Capitan neiyi yakapusa sarudzo
Miguel Angel Juncos | | apuro, OS X El Capitan, Tutorials
Izvo zvinonzi Split View kana kupatsanura kushandiswa kwescreen kwemaapplication maviri panguva imwe chete hachisi chinhu chitsva, kwenguva yakareba iyo ficha inogona kuenzanisirwa mune akasiyana mavhezheni eiyo system, chimwe chinhu chinodzikamisa mashandiro ayo kuyananisira hwindo rekushandisa rinoenderana nehafu yechiratidziri, ichiita zvimwechetezvo nekushandisa kwechipiri mune imwe hafu. Zvishandiso senge Cinch pane OS X ivo vakazviita zvega pasina isu isu kuti tizviite nemaoko.
Kutaura chokwadi, iyo chete poindi ino Split View ficha inogadzira uye kuti haigone "kutambwa" na bhuku rewindo rekugadzirisa, ndeyekuti inotipa mukana wekuti uve nemaonero akazara ezvekushandisa zviviri panguva imwe chete, kureva kuti, pasina mahwindo emafafitera, nezvatichawana munzvimbo yekushandira uye kuona zvirinani kwekushandisa.
Nekudaro vamwe vashandisi vanga vachiedza kushandisa Split View pane OS X El Capitan vaona kuti chimiro ichi kusashanda zvakanaka, kusakwanisa kumisikidza maapplication maviri panguva imwe chete pane split screen.
Iko kusagadzikana kwekutadza kumisikidza Split View kunowanzo kuve nekuda kwekuti mushandisi akagadziridza kuOS X El Capitan kubva pane yapfuura vhezheni yeanoshanda system uye nenzvimbo yakanangana chaizvo apo kana uchinyorazve mamwe mafaera, iro rakakamurwa skrini basa rakaremara. Kunyangwe zvakadaro, hakusi kukundikana kusingakundike uye kune mhinduro yakapusa iyo inotigonesa kumisikidza sarudzo tisina kudzoreredza chero chinhu.
Kuti tiite izvi isu tinozovhura System Zvaunofarira kuburikidza nepamusoro menyu . Kamwe mukati isu tichasarudza Mission Kudzora mumutsara wekutanga wesarudzo. Tichaongorora uye tiongorore zvakare bhokisi "Izvo zvidzitiro zvine nzvimbo dzakaparadzana", tichavhara zvese zvinoshandiswa uye isu titangise iyo Mac.
Kana tangotangwazve isu tinofanirwa kukwanisa kuita Split View, nzira yekuzviita inotsanangurwa munyaya inotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » OS X El Capitan » Gadzirisa matambudziko ne Split View mu OS X El Capitan neiyi yakapusa sarudzo
Izvo hazvishande kwandiri, ini ndakatozviita uye handikwanise kuzviita, ndokumbirawo ubatsire por
Pindura kuna lupita
Ndakazviita sekutsanangurwa uye hazvishande
Izvo zvinoshanda… ingo tarisa uye redial.
Ipapo, pinda kunze sezvakaratidzwa, uye pandinopinda zvekare, iyo Split yekuona yatove kundishandira.
Shamwari yePinterest yemahara kwenguva yakati wandei paMac App Store
Noyo ESL, Anwendung kudzidza Chirungu mahara kwenguva shoma